Kuyambuka-Muganhu Kubatana Kwezvakatipoteredza: Israel, Palestine neJorodhani
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Nhau Nhau » Kuyambuka-Muganhu Kubatana Kwezvakatipoteredza: Israel, Palestine neJorodhani
Nhau Nhau • Kuputsa Kufamba Nhau • tsika nemagariro • Israel Breaking News • Jorodhani Kuputsa Nhau • Palestine Kuputsa Nhau • vanhu • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Shadi Shiha paakasvika pamuganhu weIsrael-Jordan ndokuona mauto eIsrael akashongedzwa nemureza weIsrael, akapotsa atendeuka odzokera kumba.
"Ndakavhunduka chaizvo," Jehovha akaudza The Media Line achiseka. “Ndakange ndaona mapurisa kuJordan asi havana pfuti. Ndanga ndichifunga kuti ndiri kufamba munzvimbo yehondo nematangi nepfuti. ”
Izvo zvaive zvatove zvakaoma kugutsa mhuri yake kuti imurege auye kuchikoro kuIsrael. Ivo vainetsekana nezve kuchengetedzeka kwake, uye kunyangwe makakatanwa achangoburwa pakati peIsrael neJorodhani, maJordania mazhinji akapikisa kutaurirana neIsrael. Jordanian intelligence service yakamudaidza musangano uye ikamubvunza kuti sei achienda kuIsrael.
Izvo zvaive rinenge gore rapfuura. Shiha, anovawo mutambi wekusununguka, akapedza masemita maviri kuArava Institute kuKibbutz Ketura kumaodzanyemba kweIsrael uye anoti zvakachinja maonero ake epasirese.
"Ini ndaisaziva kuti paive nenzvimbo yekuti maPalestine nemaIsrael vanogara pamwe chete uye vanongova shamwari," akadaro. “Ndakaenda kuHaifa (guta rakavhengana revaArabhu nemaJuda) uye vanogara vese sechinhu chisiri chinhu. Ndakaendawo kumisasa yevapoteri yePalestine muWest Bank uye zvaive zvakaipa kuti vanhu vaigara sei. ”
Iyo Arava Institute, yakabatana neBen Gurion University, inopa zvirongwa zvakavanzika zvevose vari undergraduates uye vakapedza vadzidzi. Vamwe vanouya semester; vamwe kwegore rose. Pfungwa iyi ndeyekudzidza nyaya dzezvakatipoteredza kubva pamuchinjikwa-pamuganhu uye pakuyambuka maonero.
Chirongwa ichi chidiki, chinopa mikana yeumwe-ne-mumwe kusangana nevaporofesa uye mukana wekuita ongororo yezvakatipoteredza.
"Kwemakore makumi maviri Institute yakasimudzira kudyidzana kwepakati pemuganhu mukutarisana nemakakatanwa ezvematongerwo enyika kuburikidza nechirongwa chedu chedzidzo chinounza pamwechete maIsrael, maPalestine, maJordaniya nevadzidzi vekunze," David Lehrer, Executive Director wechirongwa ichi akaudza The Media Line. "Kuburikidza nezvirongwa zvedu zvekutsvagisa mvura, simba, kurima kwakachengetedza, kuchengetedza pamwe nekusimudzira nyika dzese, mushure memakore makumi maviri isu tine vadzidzi vanopfuura 20 pasi rese."
Makosi anotangira paMvura Management kuMiddle East kusvika Environmental Mediation uye Conflict Resolution kuenda kuBhaibheri sekiyi yeKufunga Kwemamiriro ekunze. Vadzidzi vanowanzo kuve chetatu Israel, chetatu Arabhu, inosanganisira maJordani, maPalestine, uye vagari veArabhu veIsrael, nechetatu nyika dzekunze, kunyanya vanobva kuUS.
Vadzidzi vePalestine vakaramba vachipinda zvisinei nekukura "anti-normalization", kufamba kunoongorora kubatana kwevaIsrael nePalestine kusvika paine budiriro mukutaurirana murunyararo. Lehrer anoti zvave zvakaoma kugonesa vadzidzi veJordanian kuti vaende, sezvo ruzhinji rwevanhu muJorodhani vachipesana neIsrael rakawedzera.
"Ini ndaida kuziva zvakawanda nezvekupokana kweIsrael nePalestine," akadaro Shiha. “Ini ndakanzwa zvese kubva kunhepfenyuro uye nhepfenyuro zvinoita kuti zvioneke sezvakaipa chaizvo. Ndakauya pano kuzosangana nevamwe vechiIsrael nevamwe maJuda nekuti handina kumbobvira ndasangana navo kare. Kubva munhau, zvaitaridza kuti vaigara vachiuraya nekupfura maArabu. ”
Iyo Arava Institute inogara paKibbutz Ketura, yakawanda yakawanda kibbutz yakatanga yakavambwa mu1973 nevaAmerican vakabatana nevechidiki vechidiki veJudhiya, mukati megwenga reArava. Nhasi, kune vanopfuura mazana mashanu evaIsrael vanogara imomo, nemabhizinesi anotangira pamazuva ekukura kusvika kurima tsvuku algae yezvizoro kusvika kune rakakosha munda wemichero yekurapa.
Ipo vadzidzi vachigara mumadhorobha pane iyo kibbutz, ivo vanodya kudya kwavo kuimba yekudyira kibbutz uye vanokokwa kujoina nhengo dzebibbutz kumhemberero dzechitendero uye zviitiko zvebbbutz-wide kusanganisira michato. Kune zvakare dziva rekushambira rakakura seOlympic iro rinobatsira kurova kupisa kwemurenje.
Kufanana nevakawanda vanodzidza kunze kwenyika zvirongwa, izvi hazviuye zvakachipa. Nepo maPalestine nemaJordanian vachigamuchira zvizere kudzidza, vemuIsrael vanobhadhara madhora zviuru zviviri, uye vadzidzi veUS vanobhadhara $ 2000 semester, kusanganisira kamuri nebhodhi. Izvo zvichiri zvakaderera zvishoma pane angangoita ese maAmerican makoreji.
Yonatan Abramsky, mudzidzi weIsrael, achangopedza basa rake rekumanikidza.
"Ini ndaigara ndichifarira nyaya dzezvakatipoteredza uye hupenyu husingaperi," akaudza The Media Line. "Ini ndanga ndiri mukutsvaga nharaunda mugwenga ndikanzwa yenzvimbo ino ndikazviongorora." Zvaishamisa. ”
Dallal, mukadzi wePalestine uyo akabvunza kuti asamupe zita rake rekupedzisira, akatopedza degree reBA kubva kuBir Zeit University.
"Handina kufunga kuti ndaizonakidzwa nazvo sezvandinoita," akaudza The Media Line. “Ini ndinogona kutaura chero chinhu chandiri kuda kutaura, uye ndiite chero chandinoda. Ndiri kuzviratidza ini ndoga zvisinei nekwakabva uye mhuri. Handina kunetseka zvakanyanya sezvandiri kuWest Bank. ”
Vakati amai vake vaisada kuti abve kuWest Bank, asi nekuda kwezvimwe zvikonzero zvetsika zvisina chekuita negakava reIsrael nePalestine.
"Imhaka yekuti ini ndiri musikana uye ndine rimwe basa - ndinofanirwa kuroorwa uye kuita vana, kwete zvekufamba," akadaro.
Iyo Institute ichangopemberera yayo makumi mavirith gore. Sechikamu chemhemberero idzi, vakaparura chirongwa cheArava Alumni Innocation, icho chinopa mari yembeu kumakambani evadzidzi kuti vatsigire zvirongwa zvekuchengetedza uye hukama hune runyararo pamiganhu. Iwo zvikwata zvinofanirwa kusanganisira angangoita nyika mbiri - Israeli / Palestine kana Israeli / Jordanian kana Palestine / Jordanian.
Jordanian Shadi Shiha adzokera kuAmman uye akavhura bhizinesi neshamwari mbiri, yekuwachisa mota uye wakisi isingashandisi mvura. Mukudonha, anenge achishanyira makoreji eU.S.chikamu cherwendo rwekunotora yeArava Institute.